Maalinta: Maarso 24, 2018
Shilalka nasiib darada ah inta lagu guda jiro safaraha ugu horreeya ee Tram
Fahrettin Altay-Halkapınar tram ayaa saaka duullimaadyadeedii bilaabay laakiin waxaa jiray musiibo weyn. Duulimaadyadii ayaa joogsaday muddo yar markii taraamka uu xoqey baabuur la dhigtey meel qaldan. Fahrettin Altay-Halkapınar, oo socodkeeda bilaabay maanta [More ...]
Jadwalka Mashruuca Guriga
Waqtiga Konak Tram: Qorshaha Xagaaga Xagaaga ayaa la dabaqayaa. Marka loo eego, 06.00 - 00: 20 saacadood inta u dhaxaysa saacadaha 7,5 waxaa lagu qabtaa xilliyo kala go 'ah. Intaa waxaa u dheer, tirada rakaabka ayaa raacay qodobbada dheeriga ah [More ...]
Agaasimaha Caafimaadka ee hawlgabka Cengiz Uzuncan wuxuu la hadlay Sihhiye Wagon
Waxqabadka Maalinta Caafimaadka ee 14 Maarso dhexdeeda oo ku saabsan baaxadda socota Bandhigga Taariikhda Caafimaadka ee Caafimaadka Basmane Gar, Agaasimaha Hawlgabka Caafimaadka Dr. Cengiz Uzuncan wuxuu ku soo bandhigay 'Sıhhıye Wagon', oo uu in muddo ah shaqeeyay, 'Shirka Sheekada Caafimaadka ee konferans konferans'. [More ...]
Maktabada xajinta waxay u imaaneysaa İzmir
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay u dabaal dagi doontaa Toddobaadka Maktabada iyagoo wata nashaadyo midab leh. 26 Maarso-1 Abril waxaa lagu dhiirigelin doonaa in la akhriyo buugaagta leh barnaamijyada la qaban doono. Maktabadda Pir Library ağı waxaa laga furi doonaa Ahmet Piriştina Ferry oo wata gaari ku dhow 1000. [More ...]
TCDD 3 oo ka socda DEMARD. Booqashada Gobolka
Aziz Dağlı iyo xubnihii guddiga ayaa dib loogu doortay gudoomiye kuxigeenka Ururka tareenka "DEMARD" İzmir Laanta. Maareeyaha Gobolka Selim Koçbay iyo kuxigeenka Maareeyaha Gobolka Soner Baş. gobolka [More ...]
Mashruuca Tareenka High Speed ​​Train ee Ankara-Sivas Highway, 25 March March 2018 waxaa la qaban doonaa Axadda 10.30 iyadoo kaashaneysa Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta Ahmet ARSLAN oo jooga Yerköy (Yozgat) YHT. [More ...]
Kanaalka Istanbul waa 3. Cabbitaanka garoonka
1,5, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, Ahmet Arslan, ayaa ka soo bixi doona mashruuca Channel Istanbul. Wuxuu sheegay in dhulka ku xiga garoonka diyaaradaha loo isticmaali doono cagaar. Channel Istanbul [More ...]
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Kheyraadka Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa yiri ıyla Ka qeybgalka Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha waxaan bilownay inaan uruurino meelaha lugaha buundada ay fariisan doonaan sidoo kale waxaan sameynay waajibaadka salka hoostiisa lugaha buundada si ay u fariistaan ​​dhinacyada. [More ...]
Maanta taariikhda: 24 Maarso 1926 Arade-Diyarbakir-Ergani Line
Maanta taariikhda 24 March March 1926 Arade-Diyarbakır-Ergani Line ayaa loo badalay Fevzipaşa-Malatya-Ergani-Diyarbakir. Dhismaha qadka ayaa la siiyay shirkadda deenishka-Iswidishka Nydqvist Holm. 24 Mart 2018 Dhamaan Gaadiidka Tareenka ah ee la bilaabay